Fitsidihana eto Madagasikara :: Fiara Karenjy no « Papamobile » hitondra ny Papa Fransoa • AoRaha
Fitsidihana eto Madagasikara Fiara Karenjy no « Papamobile » hitondra ny Papa Fransoa
Naseho am-pahibemaso teny amin’ny trano fonenan’ny Solontenan’ny Vatikana miasa sy monina eto Madagasikara eny Ivandry, omaly ny fiara hitondra an’ny Papa Fransoa mandritra ny fitsidihany eto Madagasikara, amin’ny 6 septambra ho avy izao. Homen’ny orinasa Le Relais Madagasikara maimaimpoana ny fiangonana katolika io fiara ho solon’ny “Papamobile” mpitondra ny Ray masina io aorian’ny fampiasan’ny filohan’ny Vatikana azy.
« Nandray am-pahavononana ny tolo-kevitra avy amin’ny orinasa mpanamboatra fiarakodia malagasy Karenjy ny Solontenan’ ny Papa Fransoa sy ny Fiketrahana masina. Efa nanamboatra ny fiara nitondra ny Papa Jean Paul II tamin’ny taona 1989. Mitondra etoana ny fisaorana ny orinasa Karenjy nanaiky ny hanome tanana avy amin’ny fahaiza-manaony sy ny hatsaran’ny vita malagasy aho », hoy ny monsenera Paolo Gualtiari, Solontenan’ny Papa Fransoa eto Madagasikara teny Ivandry omaly.
Fanakaikezana ny vahoaka
Tsy nataotao fahatany ity fiara hitondra ny filohan’ny fiangonana katolika manerantany ity, araka ny loharanom-baovao iray. Nisy tolo-kevitra nalefa tany Vatikana nanontaniana ny hevitry ny Papa Fransoa. “Raha fintinina dia zavatra tsotra no ilain’ny Papa, araka ny valin-teniny. Sitrany raha fiara ahafahany manakaiky kokoa ny vahoaka malagasy no hitondra azy”, hoy ny loharanom-baovao.
“Mino aho fa ho faly ny Papa Fransoa satria afaka hifandray amin’ny vahoaka malagasy amin’io fiara hitondra azy antsoina hoe Papamobile io”, hoy ny Solontenan’ny Papa teo am-pamaranana.
Mifandray tsara amin’ny fitiavan’ny Papa Fransoa manampy ny mahantra ny orinasa Relais Madagasikara izay misy ny Karenjy. Manana iraka hanampy amin’ny fampandrosoana ny firenena io orinasa io, araka ny filazan’ny mpitantana azy teny Ivandry, omaly. “Laharam-pamehana amin’ny fanomezana asa ao amin’ny orinasa ireo olona sahirana na voahilikiliky ny fiarahamonina “, hoy izy ireo.
Tan-tsoroky ny fitondrana foibe :: Sakanan-dry Lalao Ravalomanana sahady ny fanavaozana ny kianjan’i Mahamasina